Deegaanada Beesha Murusade dib u dhac wayn ayaa ka jira waxayna deegaanada kale ee Soomaaliya ka danbeeyaan 15 sano Yaa Masuul ka ah dib u dhacaas ? | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Deegaanada Beesha Murusade dib u dhac wayn ayaa ka jira waxayna deegaanada...
Deegaanada Beesha Murusade dib u dhac wayn ayaa ka jira waxayna deegaanada kale ee Soomaaliya ka danbeeyaan 15 sano Yaa Masuul ka ah dib u dhacaas ?
Degmooyinka Ceelbuur ,Galhareeri,Darri, Wabxo ee Gobalada Dhaxe Jaamacado kuma yaalaan ,Isbitaalo tayo leh kuma yaalaan ,Waxbarasho looga maarmo Magaalooyinka waa wayn kuma yaalaan Yaa Masuul ka ah dib u dhacaas ?
Dowladda Soomaaliya 20 Sano ayay Jirsatay Maxaa loo qabtay deeganaadaas aan soo sheegay Yaase laga rabay in ay howshaas qabtaan Ma Xildhibaanada Murusade ee 8 ah ayaa laga rabay in ay qabtaan Masa Madaxwaynayaashii Soo maray 20 kaas Sano ayaa laga rabay ?
Dhalinyarada ku dhashay deegaanada aan soo sheeg iyo Aniga oo aan ku dhalan Waxaa ina saran waajib kaasoo ah in aan u hadalno dadka deegaankaas dagan ee aan awoodin in ay hadlaan ,aan awoodin baahidooda in aynsoo badnigaan ee fadlan aan u istaagno Bad baadinta deegaankeena si Mustaqbalka Caruurteena ugu faa,iideestaan nimcooyinka aan ugu tagayno
Qorshe Ayaan hayaa dhalinyaro ee Aniga igu taageera Qorshaas Waxaa hubaal ah in aysan soo noqon 8 taas Xildhibaan INSHA ALLAH ….
Previous articleBeesha Caalamka oo maalinta Bari ah kulan la leh Madaxweyne Farmaajo
Next articleCiidamo ka soo Goostay Jubbaland oo iska soo dhiibay Balad xaawo
Ugu yaraan 3 qof oo ku dhimatay Is-rasaasayn saqdii dhexe...
Ugu yaraan 3 qof ayaa la sheegay in si xun loogu dhaawacay Is-rasaasayn saqdii dhexe ee xalay ka dhacday caasimadda dalkaasi ee Boon. Wargeyska Maalinlaha...
Wakiilka QM ee James Swanoo gaaray magaalada Kismaanyo
Dilkii arxan darada ahaa ee loo geestgay George Floyd oo la...
Garsoorka dalka Tunisia oo furay baaritaan la xiriira eedeymo sheegaya in...